Tontolon`ny asam-panjakana “Hafainganina dia mihena ny kolikoly”
Antony maro no mampihisatra ny fanaovan-draharaha any amin’ny biraom-panjakana fa ny lehibe indrindra dia ny havesatry ny dingana tsy maintsy lalovana amin’ny fikarakarana taratasy sy ny kalitaon’ny fomba fiasa.
Mila mitondra fanatsarana izany mba hisorohana ny kolikoly, hoy i Johnny Rakotoarisoa, solombavambahoakan`i Madagasikara voafidy tao amin` ny distrikan`Ambohidratrimo. Ohatra momba ny fisakanan-dalana nataon`ny mpitandro filaminana (PR), dia tsara kokoa raha hasiana solontenam-panjakana misahana ny fandoavana lamandy eny amin`ny ireny toerana ireny. Amin`izay eo akaiky eo ihany ny fandoavana lamandy ka tsy misy intsony ny firesahana amin`ny saofera sy ny mpitandro filaminana. Hatramin`izay, hoy ity depiote ity, eto no voasakana kanefa ny lamandy aloa dia any amin`ny 40 km ka fotoana very. Mila manamaivana ny fomba fiasa ka raha vita no manao ny ara-dalàna ho fampiharana noho ny kolikoly dia foana ho azy ny tsolotra. Nanambara ity solombavambahoaka ity fa ny asam-panjakana mitarazoka no mahatonga ny kolikoly ka efa misy ny tolo-dalàna novolavolaina mahakasika izany, hoy hatrany ny fanazavana.